Madaxweyne kuxigeenka GALMUDUG oo sheegay in uu buray Heshiiskii Galmudug & Ehlusunna. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Madaxweyne kuxigeenka GALMUDUG oo sheegay in uu buray Heshiiskii Galmudug & Ehlusunna.
Madaxweyne kuxigeenka GALMUDUG oo sheegay in uu buray Heshiiskii Galmudug & Ehlusunna.
May 1, 2018 - By: Mohamed Dahir
Cadaado :- Maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in dib loogu laabanayo qodobo ka mid ah heshiiskii Maamulada Galmudug iyo Ahlusuna ku dhexmaray Magaalada Jabuuti ee caasimadda wadanka Jabuuti.
Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa shaaca ka qaaday in aanu dhaxal gal ahayn heshiiskii ay kala saxiixdeen Maamulka Galmudug & Ehlusunna Waljameeca ee ka dhacay Dalka Jabuuti.
Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) Madaxweyne kuxigeen Galmudug oo warbaahinta la hadlay waxaa uu sheegay in heshiisku buray maadama ay cabashooyin baahsan ka jiraan bulshada reer Galmudug ku bahoobay oo tabashadooda ku tilmamay midaan ku salaysnayn saami qaybsiga Maamulka.
“…Waxaa jira in aan wax badani ka fulin qodobadii heshiiska ee dhamaa 14ka qodob, waxaa nasoo gaaraya cabashooyin ay soo gudbiyeen Odayasha dhaqanku oo ay leeyihiin waxaa lagu xad gudbay awood qaybsiga Galmudug….” ayuu yiri Madaxweyne kuxigeenka Galmudug.
Maamulka Galmudug ayaa shirkii Jabuuti waxaa heshiis hore ugu dhexmaray Madaxii Maamulka Ehlusunna Waljameeca ee uu hogaaminayey Sheikh Axmed Shaakir, waxaana kulankaas oo korjoogto kala duwan goob jog ka ahayd lagu dhexdhaxaadiyey awood qaybsiga Maamulkii Galmudug ee Cadaado fadhiyey iyo Ehlusunna Waljameeca oo ka talisay Dhuusamareeb oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulkaasi, waxaana lagu heshiiyey 14 qodob oo ay ku jirtay awood qeybsiga labada dhinac iyo wada shaqeynta.